ပြောင်းလဲသူလူသစ်များအတွက် ခုနှစ်ချက် | Seven Points for New Converts | Real Conversion
အောက်တိုဘာလ ( ၇ ) ရက်၊ စနေနေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“ထိုသိုပြန်ကြစဉ်၊ တပည့်တော်များ၏စိတ်နှလုံးကို မြဲမြံခိုင်ခံစေ ( ခွန်အား ပေးလျက် ) သဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မည်အကြောင်းနှိုးဆော် ချီပင့်၍၊ငါတို့သည် မြားပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရကြမည်။”
( တမန် ၁၄း ၂၂ )
အသုံးချဓမ္မသစ်အနက်ဖွင့်ကျမ်းက ထိုကျမ်းပိုဒ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဤသို့ဆို သည်။
နေရာတစ်ခုတွင် ဧဝံဂေလိတရားကို တစ်ကြိမ်တည်းဟောပြော ခြင်းသည် လုံလောက်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်သူများကို သင်ကြားပေးပြီး ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးရန် မှာလည်း လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤသည်မှာ ပေါလုနှင့်ဗာနဗ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသောအရာဖြစ်ပါသည်။ သူတို့က ကောင်း ကင်ဘုံထဲသို့ဝင်လိုသောတပည့်တော်များသည် ခက်ခဲခြင်းများစွာ ( ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၊ ဖိအား ) ကို သည်းခံနိုင်ရမည်ဟု ယုံကြည်သူလူ သစ်များကို သတိပေးထားကြသည်။
တမနတော်ပေါလုက “ငါတို့သည် အတူဒုက္ခရောက်လျှင်၊ အတူစိုးစံကြလိမ့်မည်” ( ၂ တိ ၂း ၁၂ ) ဟုဆိုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အမှန်တကယ် ဆက်ကပ်အပ်နှံသောခရစ်ယာန်သည် ခရစ်တော်နှင်ပအတူ လာလတံ့သောနိုင်ငံတော်တွင် ခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရန် ခရစ်အသက် တာ၏ဖိအားကို သည်းခံနိုင်ရမည်။ “ထို့ကြောင့် သင်သည် ခရစ်တော်၏ ကောင်းသောစစ် သူရဲကဲ့သို့ သည်ခံရမည်။” (၂ တိ ၂း ၃)
၁။	ပထမအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခက်အခဲအချို့ကို ကြုံတွေ့မရမည်။
ထိုအရာမှာ သင်သိရှိရမည့် ပထမဆုံးအရာဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ကောင်းကင်သွား ရုံသက်သက်အတွက် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးနောက် တွင် “ထိုသို့အလို့ငှါသင်သည်၊ ယေရှုခရစ်ထံ၌ ကောင်းသောစစ်သူရဲကဲ့သို့၊ ဆင်းရဲဒုက္ခကို သည်းခံလော့။…သည်းခံလျှင် ထိုသခင်နှင့်အတူ စိုးစံလိမ့်မည်။” (( ၂ တိ ၂း ၃၊ ၁၂ ) ကျွန်ုပ် တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သို့မသွားမှီ ဤအရာကို သင်ကြားပေးကြသည်။ သင်သည် ယေရှု ခရစ်ကိုယုံကြည်ရုံသက်သက်ဖြင့် ကောင်းကင်သွားမည်ထင်သည်ဟု ထင်မိသည်။ ဒေါက်တာ Dr. Timothy Lin က ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံတော်၌ ခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရမည်အကြောင်း အောင် မြင်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ရမည်ဟု သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ “အကြင်သူသည် အောင်မြင် ၍ အဆုံးတိုင်အောင် ငါ့အကျင့်ကိုကျင့်၏။ လူမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးစေခြင်းငှါ ထိုသူအား ငါသည် အ ခွင့်ပေးမည်။” ( ဗျာဒိတ် ၂း ၂၆ ) မွတ်စလင်တိုင်ပြည်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရှိကြသောခရစ်ယာန် များက သူတို့သည် နိုင်ငံတော်၌ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အုပ်စိုးရသောအခွင့်ရှိမည်ကို သိကြပါ သည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနေကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့၏အခြေပြုကျမ်းစာက “ငါတို့သည် များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရကြမည်။” ( တမန် ၁၄း ၂၂ ) တမန်တော်ပေါလုက ခရစ်ယာန်သစ်များအား သူတို့သည် လာလတံ့သောနိုင်ငံတော်တွင် ခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံခြင်းအခွင့်ကိုရရှိရန် ဆင်းရဲ ဒုက္ခ(ထိလီဆိ- ဖိအား) ကိုခံရမည်အကြောင်း သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သင်သည် ဤ နိုးထမှုတွင် ပြောင်းလဲသောသူဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ၎င်းမှာ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Watts ၏ နာမည်ကျော်ဓမ္မသီချင်းက သွန်သင်ခြင်းကိုပြုသည်။ ဤသီချင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း သုံးရာကျော်ကြဖြစ်ပါသည်။
မိုးကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူသွား၊ ပန်းမွေ့ယာတွင် အိပ်စက်၊
အခြားသူများ ဆုလဒ်သရဖူအတွက် တိုက်ပွဲဝင်၊ သွေးချောင်းစီးပင်လယ်ဖြတ်သန်းကြ။
ကျွန်ုပ်တိုက်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်စိုးစံမည်၊ သခင်၊ ခွန်အားများပေးသနားပါ၊
( “ကားတိုင်တော်စစ်သားဖြစ်သလော၊” Dr. Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ).
၂။	ဒုတိယအချက်၊ သင်သည် ကျမ်းစာတစ်အုပ်ပိုင်ရမည်၊ ဖတ်ရမည်။
“ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအား ဖြင့်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏လူသည် စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသော အမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလို့ငှါ ပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အ ကြောင်း၊ ဩဝါဒပေးခြင်း၊ အပြစ်ကိုဘော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ပြု ပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်းကျေးဇူးများကို ပြုတတ်၏။” ( ၂ တိမောသေ ၃း ၁၆၊ ၁၇ )
သင်သည် Scofield Study ကျမ်းစာကို ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ် က စာမျက်နှာပြောထားသည်ဖြစ်၍ နောက်ကလိုက်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်မည်။ သင်သည် ဤတရား ဒေသနာစာမူကို အိမ်သို့ယူသွားပြီး တပတ်အတွင်း ထိုစာများကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။ ရေဒီယို သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွင် တရားဟောသူများ၏ ဟောပြောချက်ကို နားမ ထောင်ကြပါနှင့်။ ဒေါက်တာ J. Vernon McGee မှတပါး အဘယ်သူ၏တရားဒေသနာကိုပင် နားမထောင်ကြပါနှင့်။ သင်သည် သူ၏သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာမှုအစီအစဉ်ကို နေ့ဘက် သို့မ ဟုတ် ညဘက်ပါ www.ttb.org သို့မဟုတ် www.thrutheBible.org. ဖြင့် အချိန်မရွေးနား ထောင်နိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ McGee သည် အမှတ် ၅၅၀၊ တောင်မျှော်လင့်ချက်လမ်း၊ လော့အိမ်ဂျယ်လ်မြို့တွင်း၌ရှိသော ဖွင့်ထားသောတံခါးအသင်းတော်၏သက်တမ်းရှည် သင်း အုပ်ဆရာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် သူ၏တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ရင်း သင် ခန်းစာယူခဲ့သည်။ သူသည် ယနေ့ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝန်းတွင်တွေ့ရသော မှားယွင်းမှု၊ နှင့် မမှန်ကန်သောအမှုများအားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်ပါသည်။ သူသည် ရေဒီယို သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံ ကြားတွင် သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားပေးသည့် တစ်ဦးတည်းသောသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦး တည်းသာဖြစ်ပါသည်။ လူများစွာတို့သည် ဒေါက်တာ McGee ၏ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ကြား နားခြင်းမတိုင်မှီ သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်လွှတ်သောအရာကို နားထောင်လျက် သတင်းစကားကို ရရှိကြပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင့်ကွန်ပြူတာထဲတွင် နားထောင်ခြင်းသည် ပို၍ လွယ်ကူသောအဆင့်သို့ ရောက်သွားနိုင်ပါမည်။(အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအားလုံးကို www.ttb.org/global-reach/regions-languages. တွင် တွေ့နိုင်မည်။
ကျမ်းစာကို နေ့တိုင်းဖတ်ပါ။ “ကိုယ်တော်ကိုမပြစ်မှားဘဲ နေနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဗျာ ဒိတ်တော်ကို နှလုံးထဲမှသိုထားလျက်ရှိ၏။” ( ဆာလံ ၁၁၉း ၁၁ )
၃။	တတိယအချက်၊ အလည်အပတ်သွားခြင်းမှတပါး အခြားဘုရားကျောင်းသို့မသွား ပါနှင့်။
ကျွန်တော်တို့သည် မကောင်းသည့်အရာပြည့်လျှံနေသည့်ကာလတွင် အသင်းတော် များ၌ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ သူတို့နှင့်ဝေးဝေးနေပါ။
“မိစ္ဆာပရောဖက်များတို့သည် ပေါ်လာ၍ လူအများကို လှည့်ဖြားကြ လိမ့်မည်။ မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့် အများသော သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” ( မဿဲ ၂၄း ၁၁၊ ၁၂ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားအသင်းတော်များကို ထောက်ခံမပြောဆိုနိုင်ပါ။ နှစ်ခြင်းအသင်းတော် များကပင်လျှင် “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ” နှင့်အခြားမှားယွင်းသောအရာများကို မကြာခဏဆိုသလို မြှင့်တင်နေကြသည်။
၄။	စတုတ္ထအချက်၊ တနင်္ဂနွေနံနက်နှင့်ညနေတိုင်း ဤဘုရားကျောင်းတက်ရမည်။ ကြာသပတေးည ဆုတောင်းအစည်းအဝေးတွင်လည်းပါဝင်ရမည်။ အပတ်တိုင်း လုပ်ဆောင်နေကျ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းမှာလည်း ပါဝင်ရမည်။
၅။ ပဥ္စမအချက်၊ သင်းအုပ်နှင့်လက်ထောက်သင်းအုပ်ကို သိရှိထားပါ။
သင်သည် ဒေါက်တာ Hymers ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီး အချိန်မရွေး မေးခွန်းမေးနိုင် သည်။ သို့မဟုတ် အသင်းတော်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
“ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို သင်တို့ဟောပြော၍၊ သင်တို့ကိုအုပ်သောသူတို့ကို အောက်မေ့ကြလော့။ သူတို့သည် အဘယ်သို့ကျင့်ကြံပြုမူ၍ စုတေ့သည်ကို စေ့စေ့ဆင်ခြင်လျက် သူ တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို မှီအောင်လိုက်ကြလော့။” ( ဟေဗြဲ ၁၃း ၇ )
“သင်တို့ကို အုပ်သောသူတို့၏စကားကို နားထောင်၍ နှိမ့်ချလျက် နေကြလော့။ သူတို့သည် ကိုယ်တိုင်စစ်ကြောခြင်းကို ခံရသောသူ ကဲ့သို့၊ သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အကျိုးအလို့ငှါ စောင့်နေကြ၏။ သင် တို့အကျိုးကိုမဖြစ်တတ်သော ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိ။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ ၍၊ သူတို့သည် စစ်ကြောခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းသတိပြုလျက် နေကြလော့။” ( ဟေဗြဲ ၁၃း ၁၇ )
“သင့်ပေါ်မှာအုပ်စိုးလိပ်မည်” ဟူသောစကားလုံးကို “သင်၏ခေါင်းဆောင်များ” ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ The Reformation Study Bible က ဟေဗြဲ ၁၃း ၁၇ နှင့်ပတ်သက် ၍ “သစ္စာရှိသောအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များသည် သစ္စာရှိသောသိုးထိန်းများပင်ဖြစ်ကြ၏။ …ခေါင်းဆောင်၏ ( သင်းအုပ် ) စောင့်ရှောက်မှုသည် နက်ရှိုင်းပြီးစစ်မှန်သောအရာဖြစ်သည်။ အ ဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ခန့်ထားခြင်းကိုခံရကြသဖြင့် တနေ့ပြန် တောင်းမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏အမှုတော်သည် တွန်းလှန်ခံရနေလျှင် လူတိုင်းဒုက္ခခံစားရပါ မည်” ဟုဆိုသည်။ သင်းအုပ်သည် ဒေါက်တာ Hymers ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ( ၈၁၈ ) ၃၅၂-၀၄၅၂ ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။ လက်ထောက်သင်းအုပ်မှာ ဒေါက်တာ Cagan ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ( ၃၂၃ ) ၇၃၅-၃၃၂၀ ဖြစ်သည်။
၆။	ဆန္ဒမအချက်၊ သင့်ဘဝတွင် ဝိညာဉ်ရိတ်သိမ်းခြင်းကို ဦးထိပ်ထားပါ။
ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာဖို့ လူတို့ကို ဆောင်ယူခြင်းအမှု၌ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမ ရှိဘဲ အဘယ်သူမျှ ခရစ်ယာန်ကောင်းတစ်ဦးမဖြစ်နိုင်ပါ။ယေရှုက “ငါ့အိမ်ကိုပြည့်စေခြင်းငှါ အ နိုင်အထက်ခေါ်သွင်းလော့” ( လုကာ ၁၄း ၂၃ ) ဟု မိန့်တော်မူ၏။
၇။	သတ္တမအချက်၊ ဆုတောင်းအဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ဖွဲ့ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပါ။
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မည့်အရာတစ်ခုကို ရှာတွေ့ရန် မစ္စတာ Hymers သို့မဟုတ် ဒေါက်တာ Cagan ကို အကူအညီတောင်းလိုက်ပါ။ အပတ်တိုင်းဆုတောင်းအဖွဲ့ များနှင့်တွေ့ဆုံလိုက်ပါ။
“အကြောင်းမူကား၊အကြင်အရပ်၌ လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည် ငါ၏နာမ ကို ထောက်၍စည်းဝေးကြ၏။ ထိုအရပ်၌ သူတို့အလယ်မှာ ငါရှိ သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( မဿဲ ၁၈း ၂၀ )
သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသေးလျှင် အပြစ်ကနေ နောင်တရပြီး ယေရှုခ ရစ်ကိုယုံကြည်ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါသည်။ သင်သည် နောင်တရပြီး သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် သူ၏အသွေးတော်သည် သင့်အား အပြစ်တရား အလုံထဲက ကယ်ချွတ်လိမ့်မည်။
“ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ဆေး ကြောတော်မူ၏။” ( ၁ ယော ၁း ၇ )
သင်သည် ပြောင်းလဲလာသည်ဟုခံစားရလျှင် သင်၏သက်သေခံချက်ကို ဒေါက်တာ Cagan ကို ကျေးဇူးပြုပြီး ကြားနာခိုင်းပါ။ သူ၏ဖုန်းနံပါတ်မှာ ( ၃၂၃ ) ၇၃၅-၃၃၂၀ ဖြစ်ပါသည်။
“ကားတိုင်စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။"၊( ဒေါက်တာ Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ရေးစပ်သည်။ )
“ထိုသိုပြန်ကြစဉ်၊ တပည့်တော်များ၏စိတ်နှလုံးကို မြဲမြံခိုင်ခံစေ (ခွန်အား ပေးလျက် ) သဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မည်အကြောင်းနှိုးဆော် ချီပင့်၍၊ငါတို့သည် မြားပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရကြမည်။”
(၂ တိမောသေ ၂း ၁၂၊ ၃)
၁။ ပထမအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခက်အခဲအချို့ကို ကြုံတွေ့မရမည်။ ၁ တိ ၂း ၃၊ ၁၂၊ ဗျာဒိတ် ၂း ၂၆။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ သင်သည် ကျမ်းစာတစ်အုပ်ပိုင်ရမည်၊ ဖတ်ရမည်။ ၂ တိ ၃း ၁၆၊ ၁၇၊ ဆာလံ ၁၁၉း ၁၁
၃။	တတိယအချက်၊ အလည်အပတ်သွားခြင်းမှတပါး အခြားဘုရားကျောင်းသို့ မ သွားပါနှင့်။ မဿဲ ၂၄း ၁၁၊ ၁၂ ။
၄။ စတုတ္ထအချက်၊ တနင်္ဂနွေနံနက်နှင့်ညနေတိုင်း ဘုရားကျောင်းတက်ရမည်။ ကြာသပတေးည ဆုတောင်းအစည်းအဝေးတွင်လည်းပါဝင်ရမည်။အပတ်တိုင်း လုပ်ဆောင်နေကျ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းမှာလည်း ပါဝင်ရမည်။
၅။ ပဥ္စမအချက်၊ သင်းအုပ်နှင့်လက်ထောက်သင်းအုပ်ကို သိရှိထားပါ။ ဟေဗြဲ ၁၃း ၇၊ ၁၇။
၆။	ဆန္ဒမအချက်၊ သင့်ဘဝတွင် ဝိညာဉ်ရိတ်သိမ်းခြင်းကို ဦးထိပ်ထားပါ။ လုကာ ၁၄း ၂၃ ။
၇။	သတ္တမအချက်၊ ဆုတောင်းအဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ဖွဲ့ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပါ။ မဿဲ ၁၈း ၂၀၊ ၁ ယောဟန် ၁း ၇